नेपालमा अपराध गरेर अमेरिकामा ‘डिङ’ हाक्ने नेपालीहरु « Online Sajha
नेपालमा अपराध गरेर अमेरिकामा ‘डिङ’ हाक्ने नेपालीहरु
संसारको जुनसुकै कुनामा गएर जघन्य अपराध गरे पनि आफ्नो नागरिकले देशभित्र अपराध गरेको छैन भने त्यो ब्यक्तिलाई अमेरिकी सरकारले पूर्ण सुरक्षा दिन्छ।
यस्तै सुबिधाको फाइदा लिएर केही नेपाली नेपालमा गरेको अपराधबाट उम्किएका छन्। नेपालमा अपराधमा जोडिएका यी नेपालीहरु अमेरिकामा आफूलाई समाजसेवी भएको दाबी गर्छन।
सफलतालाई केवल मौद्रिक मापन गर्ने अर्थात जसले पैसा कमाएको छ, त्यो ब्यक्तिलाई मात्र सफल सम्झिने हाम्रो समाजमा उनीहरु गन्यमान्य भएर बसेका छन्। जो उनीहरुको बिगतबारे जानकार छन् उनीहरु बिभिन्न कारणले बोल्दैनन्। जसलाई थाहा छैन, उनीहरुले बोल्ने कुरै भएन। यो लेखमा यस्तै केही नक्कली भलाद्मीको चर्चा गर्न खोजिएको छ।
काठमाडौँ बत्तिसपुतलीस्थित क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिंग एण्ड फ़ाइनान्समा कमसल धितो, खराब कर्जा र हुण्डीद्वारा करोडौ रुपैयाँ हिनामिना गरेर कुनै प्रक्रियाबाट भागेर अमेरिका छिरेका कार्की थरका एक महानुभाव टेक्सासमा ग्यास स्टेसन (पेट्रोल पम्प) खोलेर बसेका छन्।
उनलाई धेरै नेपालीले ‘महान’ भनेको देख्दा म छक्क पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा उपदेशात्मक स्ट्याटस अपडेट गरिरहने उनी नेपालीहरुको विभिन्न संगठनमा सल्लाहकार पनि छन्।
सहोदर ससुरालाई कम्पनीको अध्यक्ष बनाएर जेल यात्रा गराउन सक्नेले अरुलाई के सल्लाहसुझाव देलान्, त्यो प्रबुद्धबर्गले आफै अनुमान लगाउने कुरा हो। उनका नाममा इन्टरपोलले रेड नोटिसनै जारी गरेको छ। उनी १९४ देशको प्रहरीको खोजी सुचीमा छन्। यसैकारण उनीसँग नाम मिल्नेहरुले त्रिभुबन विमानस्थल र सीमा नाकामा बिनाकाम एकछिनको लागि भए पनि झन्झट बेहोर्नु पर्छ।
करिब २० बर्ष अगाडि १५ जनालाई अमेरिका लग्छु भनेर जनही पाँच लाख रुपैयाँ ठगेर भागेका अधिकारीथरका ब्यक्ति पनि टेक्सासमै बस्छन्। पंक्तिकारसँग परिचय रहेका दुई ब्यक्ति पनि ठगिएको यो प्रकरणमा धेरैको उठिबास भएको थियो। जानकारीको अभावमा यस्तै प्रकारले नेपालमा धेरै मान्छे ठगिएका छन्। तर लाजको कारण पिडित चुपचाप बस्ने कारण धेरै घटना सार्बजनिक हुन सकेको छैन।
यी मान्यबर पनि पसल चलाएर बसेका छन्, नेपाली समुदायमा आदरयोग्य ब्यक्ति हुन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा पनि सक्रिय यी मान्यबरले नेपाल र नेपालीको हितको लागि के काम गर्लान? त्यो सबैले अनुमान लगाउने विषय हो। यद्वपि उनको बारेमा कसैले मुख भने खोलेका छैनन्।
त्यस्तै न्यु हेम्सायरमा बस्ने राजभण्डारी थरका ब्यक्ति पनि नेपाल प्रहरीको भगौडा सूचीमा रहेका ब्यक्ति हुन्। बैदेशिक रोजगारी ठगी मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले साढे दुई बर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना तोके पनि प्रहरीले पक्राउ नगर्दै डिभी परेर उनी अमेरिका छिरेका हुन्।
आफ्नो नाममा प्रहरी रिपोर्ट नबन्ने कारण नक्कली नागरिकता र त्यसैको आधारमा पासपोर्ट बनाएर अमेरिका छिरेका उनलाई आफू प्रति ठूलो भ्रम छ। अमेरिकामा नेपाली धेरै भएको र अब नेपालीहरुलाई अमेरिका आउन रोक लगाउनु पर्ने विचार राख्ने उनलाई अमेरिकाको लालपुर्जा आफ्नै नाममा रहेको भ्रम छ।
यस्तै अमेरिकामा सिनेमाको सुटिग गर्ने र त्यसैमा कलाकार बनाएर अमेरिका लग्छु वा कुनै महोत्सवमा लिएर आउछु भनेर नेपाली ठग्ने र यतै बस्नेहरु धेरै छन्। यसमा ठग्ने जस्तै ठगिने पनि धेरै थोरै जिम्मेबार छन्।
यसरी आफू बसेको प्रचलित कानुनको सहारा लिएर बचेका र त्यसैको आधारमा ठूलो ठूलो कुरा गर्ने महानुभाव अरु पनि होलान। तर यी केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यस्ता आपराधिक मानसिकता भएकाबाट देश र समाजले के आशा गर्न सक्छ? त्यो छुट्टाउने जिम्मा पाठकबर्गलाई नै दिन चाहन्छु। विएल नेपाली सेवा